Pane chaunoziva nezve Stoxx Europe Bhora? | Ehupfumi Zvemari
Ehe, varimi vanopfuura mumwe chete vachanyanya kurohwa nezita reiyi yakakosha uye inoratidzira stock index, Stoxx Europe Nhabvu. Asi chokwadi ndechekuti ndiro rakasarudzwa boka remusika wemasheya uko zvikwata zvese zvebhora zvakasarudza kupfuura neiyi nzira yebhizinesi zvakanyorwa. Kusvika padanho rekuti iwe unowana vanopfuura rimwe timu renhabvu iro gore rino rinoshuvira kuhwina iyo yaunoda Champions League. Asi mune ino kesi, ivo zvakare vachakubatsira iwe kuti uwane purofiti zvinobudirira mumisika yequity, sekumwe kuchengetedzwa kunofungidzirwa senge kwaiwanzoitwa.
Iyo Stoxx Europe Nhabvu ndiyo imwe indekisi yekudyara mari yako kuburikidza nechakasiyana uye chakasarudzika chikumbiro chevakuru mukirasi iyi yekushanda. Kwete pasina, munguva dzino anounganidza 25 ezvikwata zvinomiririra yekondinendi yekare. Iwe unoda kuziva here mazita evamwe anozivikanwa nevateveri vemitambo? Zvakanaka, vamwe vakaita seRoma, Borussia Dortmund, Benfica, Sporting Lisbon, Galasataray, Celtic uye Tottenham. Sezvaungave iwe wakamboona, iwo ekutanga-chikamu squads uye ari mundangariro dzechikamu chikuru chevateveri vemutambo uyu.
Kune rimwe divi, kana izvo zvaunoda kutsvaga rimwe remapoka makuru eSpanish, iwe wakave nerombo rakaipa kwazvo nekuti hapana kana rimwe rawo rakabatanidzwa muStoxx Europe Bhora. Zvikonzero zvinofanirwa kuwanikwa mukuti havana kutora danho rekupedzisira kubuda pachena. Nenzira iyi, Fútbol Club Barcelona kana Real Madrid ivo havazoshandira zvinangwa zvako zvekudyara mumisika yemari. Asi usazvidya moyo, nekuti zvirokwazvo mikana yebhizinesi haife yakashaikwa uye inogutsa ichi chinodiwa mune yakadai mari inodyara. Uye zvakare, vese vakaungana mune imwechete stock index.
1 Stoxx Europe Nhabvu: inoshanda sei?
2 Shanduko yakaipisisa mumusika wemasheya
3 Chinyakare indexing pane iyi index
4 Gore rino rinosiya anenge 20%
5 Shanduro isina kuenzana mumisika
6 Ivo vanovimba nei?
Stoxx Europe Nhabvu: inoshanda sei?
Iyi indekisi yakabatana zvakananga nenyika yenhabvu inozivikanwa nekufukidza zvese nhabvu nhabvu yakanyorwa pane stock stock muEurope kana Eastern Europe, Turkey kana nzvimbo yakawedzerwa yeEuropean Union. Iyo indekisi inonyatsomiririra hupamhi nekudzika kweindasitiri yenhabvu yeEuropean uye izvo kusvika makore ekuma90 apfuura yakanga isina kubatanidzwa muEuropean equities. Kubva pane ino mamiriro ese, chero stock index inoshanda senge chero imwe uye isina kana mutsauko maererano nemaitiro ayo. Kubva pane ino maonero, iwe unenge usina kana matambudziko ekushanda nemaitiro avo.
Chimwe chinhu chakasiyana kwazvo shanduko yaro iyo isingafanire kunge yakafanana neyezvakawanda zvechivanhu indices dzeEuropean stock exchange. Hazvishamisi kuti, hunhu hwavo hunodzorwa nemamwe akasiyana parameter ane zvakawanda zvekuita ne mhedzisiro, mazita anowanikwa uye kunyangwe kusaina kwavanoita mumusika wepasi rose. Saka ivo havana kuratidzwa kune zviitiko kana nhau dzehupfumi sezvakangoitika kune echinyakare tsika. Zvinogona kunge zvichitova kuti mabhegi ari kudzikira nepo Stoxx Europe Nhabvu ichikwira mumutengo kana zvinopesana. Seimwe imwezve nzira unofanirwa kuisa mari kubva ikozvino.
Shanduko yakaipisisa mumusika wemasheya
Chero nzira, Stoxx Europe Nhabvu haina kuita zvirinani mumakore masere apfuura. Kana zvisiri, pane kudaro, yakave nemisiyano ingangoita mashanu muzana poindi maererano nehumwe indices dzeEuropean equities. Zvese izvi munzvimbo yakajeka inofadza umo kukwira kwetsika kwave kuri kwakakurumbira kwezviito zvavo. Panguva iyi mukati megore rino, iri kuitawo zvakaipa kupfuura semuenzaniso iyo Eurostoxx 50. Kunyangwe zvisiri nehukuru hwemashure ekurovedza muviri. Chero zvazvingaitika, pane misiyano inonzwisisika pakati penzira mbiri dzekuita mari mumusika wemasheya.
Kune rimwe divi, iyi index yeEuropean stock market haisi panguva yayo yakanakisa kana zvakati wandei. Pane kupokana, iri kure kure kubva maxinhoroondo kuisa mucherechedzo usati wasvika 2000. Chiratidzo chekuti chikamu chakarasikirwa nesimba pakati pevashambadzi vadiki nepakati. Iko kusimba kwakasimba kwazvo sezvo kukosha kwayo kuchikwira rimwe zuva zvikamu zvayo ne5% uye inotevera inosiya zvakafanana nhamba. Chero mhedzisiro inokonzeresa inogona kukonzeresa kuti mitengo yavo ifambe nehukuru hukuru, mune imwe nzira kana imwe.
Chinyakare indexing pane iyi index
Nekudaro, echinyakare indexing haishande zvakanaka kune ino yakasarudzika kirasi yemasheya indices. Kwete zvishoma. Sezvo varimi vanoshandura zvakawanda kuita zvisungo, mafemu eEFF ari kunetsekana kugadzira dzimwe nzira dziri nani dzekuisa machengetedzo aya anoumba Stoxx Europe Bhora. Mupfungwa iyi, hazvisi zvakajairika kuona zvimwe zvigadzirwa zvemari nezvikumbiro zvekudyara. Kana mu ETF, mutual mari kana kunyangwe magwaro aripo mune chero ehunhu hwatinoreva kwachiri muchinyorwa chino.
Iwe haugone kukanganwa kuti aya akakosha tsika isarudzo yekuti iwe uende kune mabhuki kuti uone zvaunofarira kune imwe kana imwe timu yenhabvu. Kusvika padanho rekuti zvave kutokwanisika kuti iwe ugone kurongedza rudzi urwu rwekushandisa kubva kumisika yemari. Senge kubva kumwe kuchengetedzwa kwakaitwa, senge ACS, Endesa, BBVA kana chero imwe yakanyorwa pamisika yemari. Zvakare kuburikidza nhabvu iwe unogona kunatsiridza yako yepasi mutsara gore rega uye pamwe neimwe nzira inonakidza uye inotonakidza.
Gore rino rinosiya anenge 20%
Nekudaro, shanduko yaro mukati megore rino razvino haisi chinhu chakanakira nhengo dzeStoxx Europe Bhora. Nekuti zviri kuita, iyi index iri zvishoma zvishoma kupfuura 17%, panzvimbo peIbex 35 kana iyo Eurostoxx 50. Pasina kunge paine chero nhau dzekukosha kwakakosha kune aya maitiro, asi zvinopesana, ndiyo nzira yavo yekutengesa iyo inomutsa idzi dzakakomba dzakasiyana mukuumbwa kwemitengo yavo. Hazvishamise kuti makirabhu enhabvu akanyorwa pamisika yezvemari ivo pachavo, sekutaura kwevamwe vanoongorora zvemari.
Kune rimwe divi, iro zvakare rinopesana neyakawedzera hunhu hunoratidzwa mumakore achangopfuura nemamwe akakosha eIndices eEuropean. Kubva pane ino maonero, hapana mubvunzo kuti Stoxx Europe Nhabvu indekisi zvishoma purofiti, asi panguva ipi neipi maitiro anogona kuchinja uye ichave nguva yekuti vashoma uye varipakati varimari vavepo panzvimbo ino yemusangano kune vanoda mutambo uyu wakanaka. Nechinangwa chekuita kuti mari ichengetedze pamusoro pevhareji yemusika wemari mukondinendi yekare.
Shanduro isina kuenzana mumisika
Uye iyi yeEuropean Football index yakashanda sei mumakore achangopfuura? Zvakanaka, nekuchinja kwakasimba, kubvira muna 2010 kwakakwira ne30%, muna 2011 kwakadonha ne40%, muna 2012 kwakadonha zvakare, kunyanya ne10%. Izvi zvinoratidza kushomeka kwehumwechete kutora mari ine makirabhu emitambo. Nekuti pakati pegore rimwe nerimwe panogona kuve nemisiyano zvinopfuura 50%, Chinhu chisingawanzo kuwanikwa mune akakura echinyakare eEuropean indices stock. Ndokunge, ivo havaunze kuvimba kwakanyanya pakati pevashambadzi vadiki nepakati. Kana zvisiri, pane kudaro, mashandiro avo ane kusahadzika kwakawanda kuitira kuti vagone kubatsira pamwe nekubudirira.
Chimwe chinhu chinoratidzirwa zvakanyanya nehunhu hweatypiki ndechekuti ivo havatungamirirwe nenhau dzehupfumi dzinogadzirwa munyika. Kusvika pakuti dzimwe nguva zviri nyore enda usingaonekwe kwechikamu chakanaka chevamiriri vezvemari. Ichi chinhu chakanyanya kusiyanisa izvi zvirevo zvekudyara uye zvaunofanira kufunga nezvazvo kubva zvino zvichienda mberi kana iwe uchida kutora chikamu mune aya maitiro.
Ivo vanovimba nei?
Pane zvikonzero izvo izvi zvakakosha zvakanyanya uye izvo zvisinga fanirwe kuita zvakananga nenyika yemusika wemari. Semuenzaniso, zvinotevera izvo zvatichazopa kwauri panguva ino chaiyo.
Mhedzisiro yemitambo, kusanganisira chimwe chinhu chakareruka sekusunga tambo yakanaka kana yakaipa yemitambo yakateedzana yakahwina kana kurasikirwa.
Kubudirira kwe mazita ezvemitambo inonyanya kuzivikanwa karenda yemutambo wakanaka.
Kurasikirwa kwevakakosha venhabvu (nekuda kwekukuvara, chirango, nezvimwewo) kunogona kupa shanduko yakakosha kumitengo chero nguva.
Kuzivikanwa kwe kusaina-kwepamusoro izvo zvinogona kuwedzera kukosha kuchikwata chenhabvu.
ari kodzero dzeterevhizheni ino sosi yakakosha yemari kumakambani akasarudzika uye nekudaro inokanganisa kuenderana kwemitengo yavo.
La manejimendi manejimendi yekirabhu iyi zvakare inosarudza chinhu kuziva iyo chaiyo mamiriro, kunyangwe isiri padanho rakaenzana nemamwe makirasi emasheya pamusika wekutengesa. Kunyangwe zvichange zvakakosha kwazvo kune yako yakakosha ongororo uye izvo zvinotungamira kune zvinzvimbo kuvhurwa kana kwete.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Iwe une chaunoziva here nezve Stoxx Europe Bhora?